အမေရိကန် လက်လီအရောင်း ဒေတာ
လက်လီအရောင်းဒေတာသည် ကုန်စည်များ၏ဝယ်လိုအားအခြေအနေကို ပြပေးပြီး နိုင်ငံ၏ GDPအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည့် အရေးကြီးသည့် မက်ခရိုစီးပွားရေးအင်ဒီကေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် ငွေကြေးဈေးကွက်က ထိုဒေတာထုတ်ပြန်ချက်ကို အမြဲသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါသည်.
စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လက်လီအရောင်းဒေတာကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်. ဂျူလိုင်လအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဒေတာမှာ ခုနှစ်လအတွင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားအထိ အလွန်အားကောင်းခဲ့ပါသည်. ယခုလထုတ်ပြန်မည့် တတိယ သုံးလပတ် ဒေတာကိုကြည့်ပြီး အမေရိကန်စီးပွားရေးအရှိန်အဟုန် ဆက်လက်အားကောင်းနေသလားဆိုတာကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်. ထိုဒေတာထွက်ရှိပြီးသည့်နောက် USDနှင့်တွဲထားသောငွေကြေးအတွဲများအားလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာနိုင်ပါသည်.